India: Fifandonana tao Tamil Nadu Noho Ny Fanoherana Ilay Orinasa Mpamokatra Nokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2012 11:34 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 日本語, Français, Español, English
Nampitombo ny ahiahin’ny vahoaka ny fametrahana ny Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) (Tetikasa Nokleary Matanjaka), ao amin’ny distrikan’i Tirunelvel ao Tamil Nadu, ao India, izay eo am-panamboarana ankehitriny, satria mety hiteraka voka-dratsy tahaka ny fipoahan’ilay orinasa mpamokatra nokleary Fukushima ao Japana izany. Manahy ny mpikatroka fa rehefa misy horohoron-tany arahinà tsunami ao amin’ny ranomasimbe Indiana, dia mety hiteraka loza tahaka ny fahaverezan’ny tara-pahazavana “radiation” tao amin’ny foibe mpamokatra herinaratra ao Japana tamin’ny herintaona.
Efa tamin’ny folo taona mahery no nanomboka ny fanamboarana ary mety efa hiodina atsy ho atsy amin’izay ny KKNPP. Fikambananan’ny mpilatsaka an-tsitrapo S. P. Udayakumar ‘Hetsi-bahoaka Manohitra ny Angovo nokleary’ (PMANE) nitanisa antony miisa 13 mahatonga ny mpikatroka sy ny mponina tsy hanaiky ny hamelomana ilay orinasa mpamokatra herinaratra. Nanipika toy izao izy ireo:
Vahoaka maherin’ny 1 tapitrasa no monina manodidina ny 30 km misy ny KKNPP, refy mihoatra lavitra amin’ny heverin'ny AERB (Atomic Energy Regulatory Board) (Filankevitra mpiandraikitra ny angovo atomika). Sarotra tanteraka ny famindrana haingana sy mahomby ireo mponina ireo raha sendra misy ny loza nokleary ao Koodankulam.
Hetsika manohitra ny orinasa mpamokatra angovo nokleary ao Koodankulam. Sary nampindramin i Kracktivist, nahazoana alalana.
Fihetsiketsehana sy fisamborana
Manazava ny fifandonana nisy teo amin’ny mpanao fihetsiketsehana sy ny governemanta i Kracktivist:
Nameno FIRs (Taratasy fitaterana fanadihadiana) 107 anenjehana olona 55795 sy ny “hafa”, ka ny 6800 amin'ireo voampanga ho nanao “fikomiana” na “nihantsy ady tamin’ny fanjakana” ny tao amin'ny polisy.
Nosamborin’ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana 200 manohitra ny fandefasana ny iray amin’ireo fitaovana mpamelona herinaratra 1 GW anankiroa (gigawatt=1000 megawatt) tamin’ny volana Martsa 2012 , iray andro taorian’ny nanombohan’ny governemanta ny asa. Nitory ny KKNPP teny amin’ny fitsarana Tampony ao India ihany koa ny Public Interest Litigation (Ady Mikasika ny Tombotsoam-bahoaka) (PIL) . Nanoratra taratasy ho an’ny Praiminisitra ny Amnesty International, milaza ny ahiahiny mikasika ny fanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana. Na dia izany aza, nisy ihany koa ny famoriam-bahoaka sy fihetsiketsehana manohana ny famelomana ny orinasa mpamokatra herinaratra.
Nitohy hatrany ny fihetsiketsehana ka hetsika telo no nokarakarain’ny ‘People’s Movement Against Nuclear Energy’ (PMANE) na (Hetsi-bahoaka manohitra ny fampiasana Angovo Nokleary) ho fanoherana ny orinasa mpamokatra herinaratra Kudankulam, araka ny tatitra avy amin’i Kracktivist:
Fanangonan-tsonia ataon’ny mponina manohitra ilay orinasa mpamokatra nokleary sy famerenana kara-pifidianana no ho hita any amin’ny tanàna kely miisa 60 anatin’ny distrika telo mpifanolo-bodirindrina, raha fanentanana “hajao i India” kosa no ho hita manerana ny firenena.
Tamin’ny 9 Mey lasa teo, olona manodidina ny 23,000 monina aminà tanàna sivy ao Tamil Nadu no namerina ny kara-pifidianany mba hanaovana fanairana noho ny tsy firaharahiana ny fihetsiketsehena milamina ho fanoherana ny KNPP. Tsy nohamaivanin'ny governemanta izany; notterin'i Kracktivist ihany koa fa polisy an'arivony no nalefa hanodidina ny tanàna manakaiky an'i Idinthakarai ary mety ho nisy ny famoretana.
Araka ny fanambarana an-gazety, “Nofoanan'ny Hetsi-Bahoaka Manohitra ny fampiasana Angovo Nokleary (PMANE) izay nokasaina hotontosaina ny 10 mey 2012 tany Idinthakarai rehefa namoaka didy fandrarana mahatratra 144 anaty sy manodidina an'i Kudankulam ny manampahefana ao amin'ny distrika”.
Mpanao fihetsiketsehana mitokona tsy hihinan-kanina. Nampindrana ny sary DiaNuke/Aaam Janata, nahazoana alalana.
Saingy mbola nisy 9000 ihany nandray anjara tamina sit in ary an-jatony no niditra fifadian-kanina tsy mana-pahataperana. Efa nisy hatramin'ny volana lasa teo ny fitokonana tsy hihinan-kanina. DiaNuke/Aam Janata namoaka sary sasantsasany avy any Kudankulam mampiseho vehivavy mitokona tsy mihinan-kanina sy ireo tambanivohitra miaina anaty tahotra tsy mana-pahataperana.
Efa nampanantena ny Lehiben'ny Minisitra ao Tamil Nadu, Ms. Jayalalithaa, fa hanomboka hiasa tsy ho ela ny orinasa. Anuj Wankhede ao amin'ny DiaNuke nanasa mba hiady hevitra amin'ny Dr. M R Srinivasan, lehiben'ny Vaomieran'ny Angovo Atomika teo aloha raha tena “azo antoka indrindra manerantany”, araka ny lazain'ny manampahefana, ny Mpamelona angovon'aratr'i Kudankulam.
Manaiky ny hamarana ny hetsi-panoherany ny mpikatroka anti-Kudankulam raha manaiky ny fangatahany ny fitondrana.
16 minitra izayIndia